Akukho sithixo sinokuhlangula
→ NguYesu kuphela onokusindisa.
Ukuqonda ixesha lethu
→ Ukuprintwa kwentshumayelo kaHolger Nilsson ukusuka ngo-03.01.2021.
Isiprofeto kwiTestamente eNtsha
→ UPawulos uthi lowo uprofetayo wakha ibandla. Yima! Ngaba akabaniki ?!
UYesu esemafini asezulwini - ifoto engaqhelekanga evela eFinland
→ Ngenye imini lo mbono uya kuba yinyani.
UYesu nguNyana kaThixo
→ Indoda ephilisiweyo yaqala ukukholelwa ukuba uYesu wayengaphezulu komprofeti. UYesu waxelela le ndoda ukuba unguNyana kaThixo.
Izinto ezingafunekiyo ziye zanqweneleka- icandelo 1
→ Ileta yokuqala yePentekoste ka-149.
IBhayibhile ithetha ngokucacileyo ngoBathathu Emnye
→ Akunakuqondwa kakubi!
Xa amajelo eendaba obuKrestu evaliwe-ngaba kukho nabani na oseleyo onokuthi awuthethe?
→ Emva koko beza bandithatha-kwaye ngoku bekungekho namnye oseleyo onokundimela.
→ Iqela linikezela isibhengezo semfazwe kwi-YouTube.
Ithiyori zelenqe kwi-Apg29
→ Iyelenqe likhona, kodwa andivumelani namaqhinga amaninzi enziwe kwizimvo. Bhengeza uYesu endaweni-uya kuphumelela ekuhambeni kwexesha!
U-Therese Basourus Ivarsson Kwisihlalo sangaphambili-Sichongwe nge-MS kangangeminyaka eli-17, namhlanje sisempilweni ngendlela engummangaliso
→ "UTherese wafunyaniswa ene-Multiple Sclerosis, MS. Isatifikethi sonyango sithi asinyangeki, kodwa wafumana ummangaliso xa uYesu wamphilisayo."
Uhlaselo lobunqolobi lwamaSilamsi kwiindawo ezintandathu eVienna
→ Uninzi lwabantu abaswelekileyo nabenzakeleyo luxeliwe. Omnye wabanqolobi uye waqhushumba ibhombu yokuzibulala.
→ Ngaba nguTrump okanye uBiden ophumeleleyo ngokuhlwanje? Gqabaza!
Ubomi obuMnyama Matter utshisa iiBhayibhile
→ Okwangoku ayisiyo nje ingxaki kodwa ikwasiprofetho.
I-Tegnértornet e-Gränna -ukujonga okumangalisayo!
→ Jonga umbono kwaye uve i-Christer Åberg's Halelujah ikhala kunye nommemezelo okhawulezayo wokufumana uYesu kwaye usindiswe!
Siphila kwixesha lentlungu ezisixhenxe zokuzala
→ Ngokwenyani, akukho mfuneko yakutyhilwa ngakumbi ngento eza kwenzeka kwihlabathi lethu namhlanje. Akukho mntu kufuneka abonakale njengomprofeti kwaye athi le kunye nale iya kwenzeka. UYesu sele eprofeta ngayo
Iziphumo zesigqibo eBrussels: i-EU iba yintshatsheli
→ Emva koko salumkisa nge-superstate ezayo. Ngoku isihloko esise-Aftonbladet sisiqinisekiso sokuba, kwiminyaka eli-18 kamva - kodwa kungcono ufike emva kwexesha kunangaphambili.
ITestamente Endala ithi uThixo unonyana
→ Ndaphuma e-Egypt ndambiza unyana wam.
Ungalibali ukushumayela kwabangasindiswanga kwi-Intanethi
→ Ngoku ekubeni amabandla kunye neecawe zingena kwi-intanethi ngamaxesha e-corona, akufuneki baphose umyalezo wosindiso ngoYesu Krestu kwabo bangasindiswanga.
→ Zonke iintlobo zokubulala kufuneka zivinjelwe!
Ngaba usindisiwe ukuba uyona?
→ Ukukholelwa kuYesu kuyasindisa, kodwa ukuba sowona?
AbaseSweden batshutshiswa ngokwaphula umthetho i-Estonia
→ Umthetho onjalo uluncedo xa ufuna ukuyifihla inyaniso.
Incwadi yam yesibini: Engafunekiyo
→ Ibali eliyinyani linamandla kwaye lihle kakhulu kwaye alishiya mntu engafundwanga.
Akukho nto ngaphandle kwe-Knutby
→ Kuba sixakekile kwinyani, akufuneki sinike amandla kunye namandla ethu kubuxoki.
Ubomi emva kweCorona
→ Umhlaba mhlawumbi uguqulwe ngonaphakade.
Ngaba isiprofetho sika-2007 sikaDonald Trump siza kuzaliseka?
→ Isiprofetho ukusukela ngo-2007: UTrump uya kuba ngumongameli okhonzayo-ngokwamagama amabini!
Abapapashi abangamaKristu bathenga ezintandathu
→ Intengiso yesondo yenzeka ngoNovemba ngaphambi kokuba aqeshwe ngumqeshi wangoku othe wamgxotha.
Ngaba angama-666 kwisitofu sokugonya se-corona?
→ Ithini iBhayibhile?
Inyikima yeKiruna ngumqondiso wexesha?
→ Yeyona nyikima inkulu yakha yabhalwa eSweden.
→ KuHezekile isahluko sesi-7, iNkosi iprofeta kuHezekile kwaye iyathetha ngexesha elimnyama nentlekele ezayo. Ingozi eyahlukileyo ngokupheleleyo, kwaye iyodwa ngohlobo lwayo.
Uzwilakhe wase-North Korea u-Kim Jong-Un ugule kakhulu
→ Kuthiwa uyagula emva kokuhlinzwa.
Izidalwa ezikwi-space ziyabaleka umhlaba ngenxa yentsholongwane ye-corona
→ Ithiyori eliqingqiweyo eliqela ngoku liyachuma ngenxa yesibetho se-corona.
→ Ngalo lonke ixesha ibandla lihlala apha emhlabeni, ubabalo luyasebenza. Ngoku nabani na unokuza kuYesu aze asindiswe!
→ Kodwa yabona yena uMsindisi wethu uYesu Kristu iMvana yomtshato usilindele!
Indawo yentsholongwane kaCorona kuluhlu lokufa
→ Yeyiphi indawo le ntsholongwane i-corona elishumi kuyo uluhlu lokufa oluphezulu kulo nyaka?
UYesu akagwebi namnye
→ Ke ngoko, ubhubhani we-corona ayisosigwebo sikaThixo.
Abaprofeti kunye noCorona
→ Ngoku, makhe sijonge ukuba banantoni abaprofeti beTestamente eNtsha ngendima nomsebenzi webhayibhile.
Isiprofetho sikaDavid Wilkerson kwi-Corona Pandemic 1986
→ Ndibona isibetho esiza emhlabeni. kunye nemivalo, iicawa noorhulumente bavalelwe.
Amachiza kunye porn surf kwandisa ubhubhane corona
→ Le wedwa kunakuqala ebangela nempembelelo enkulu phezu kwabantu abaninzi
Corona virus: Government ecela amandla ngaphezulu
→ Oku kuyingozi ngokwenene! Ingaba eli nyathelo lokuqala ukuya ngeqhudu?
Phakathi 100 000 240 000 abantu e-United States?
→ Kodwa China uye wancipha ngaphantsi?
Adam-ixesha phambi kokuba yasezulwini engunaphakade
AmaSirayeli usebenzisa imigaqo yeBhayibhile ukuzikhusela coronavirus
→ Akukho uhlanga emhlabeni ufikile kufutshane amanyathelo uSirayeli emiselwe ukukhusela wena!
Ukubeka iliso Society of kwengoma coronavirus
→ Wama coronavirus sibona ngokucacileyo indlela eBhayibhileni ulawulo kunye nokucupha uluntu yakhiwa.
→ Emva onke amazwi 300 kaYesu 'yokuqala ukuza kwakuzaliseka, akufanele ukuba zonke iziprofeto ngokubuya kwakhe kwenzeka?
Abagula ukucula Ndibulela iNkosi zonke iintsikelelo zakho kum!
→ Ividiyo buhlungu kakhulu kwaye echukumisayo! Indoda abakhubazekileyo ukucula Ndiyambulela uNdikhoyo ngenxa zonke iintsikelelo zakhe!
National Day of Umthandazo yabhengezwa nguMongameli uDonald Trump
→ Isizathu kukuba ukugcina Melika ukusuka intsholongwane Corona.
Corona: A abafileyo - okuthiwa - Collections amakhulu akuvumelekanga
→ Corona intsholongwane ngoku lichazwa njenge lombulalazwe, ingqokelela kwama-500 akuvumelekanga, nto leyo ithetha ukuba nayo amabandla ubunzima.
UThixo engabizwanga Allah
→ Allah akanguye uThixo iBhayibhile nakuye imfundiso Muslim.
Max von Sydow ukufa - wadlala uYesu e George Stevens indoda eNazarete
→ Le filimu eqolo movie bible eyake.
UYesu uyindoda yokwenene
→ UYesu yindoda yokwenene. Obomeleleyo ngenxa ukuthobeka kunye nothando lwakhe.
→ Kuyinto ibandla enesono, evela kulo mfanekiso - i ubuKristu bobuxoki.
Unobangela Corona-ukothuka Bhabhathane
→ Urhulumente ufuna umvuzo aqingqiweyo!
Corona kunciphisa olingene
→ ixabiso Petrol waba cents 30 zitshiphu namhlanje.
UThixo uthumela akukho izigwebo
→ Endaweni yoko, wathumela uYesu uMoya oyiNgcwele umhlaba wethu!
lethality Corona intsholongwane 'is ecotha
→ Abantu abaninzi abosulelekileyo ukuphuhlisa uneempawu eziphakathi yokubanda eqhelekileyo, umkhuhlane kunye neempawu yokuphefumla, kwaye kwakhona ngokukhawuleza.
Upeyijo ku Apg29
→ Ingaba kukho isidingo?
lethality corona virus '
→ Abo baye bafa China uye waba avareji yobudala engama-79.
Ngaba UThixo okanye iphephandaba Dagen ukuba ulawulo? - Ngokuphathelele amazwe bönekonferensen Nordic umnxeba ngoxa Solna
→ Ndifumana oluziindleko kuye, xa kusenzeka, kuba njengokutshayelwa iinyawo zenu zonke ngaphambili ndacinga njengoko endibuthethileyo ngokungathi "waphuma kuThixo."
→ Kodwa kutheni eyenzeka ngoku konke oku, yaye ingumqondiso amaxesha ibonisa ukuba liza kufika imbandezelo?
Mna ke wenza cottage greenscreenen kunye nezilwanyana
→ Omnye wabuza ukuba inja yam, akukho, its wenza isikrini eluhlaza!
Abaphandi beze umyalezo omangalisayo othetha ngesiphelo
→ Ngoku izazinzulu ziye zafumana isoyikiso sokwenene izigidi zabantu emhlabeni.
Armand Duplantis wathabatha irekhodi lehlabathi egumbini Yomhlaba eemitha 6 cm 17
→ Kodwa ithemba lethu abakholwayo kuYesu makhulu kakhulu!
Ngaba zonke iingwenya, iinyoka, iimpukane, izigcawu, iingonyama, amahlosi, iindlovu, ookrebe, nentlanzi ezulwini?
→ engqondweni yethu ubhalo uzaziyo ngokukhawuleza embi ukuba oku akanakuba tye.
Hackerförsök på Apg29
→ Det har åter igen gjorts hackerförsök på Apg29 i form av SQL-injektioner.
→ Bonke abo ugula musa kufa!
→ Njani uThixo xa umlinganiselo zesisa e Sweden?
iimfundiso kunye nenkolo Buddha kaThixo ayikwazanga ukugcina dha seal Myanmar
→ "Ndaba incipha ngokuncipha, wawa zingqondweni waza washiya umzimba baza bafa."
Ukuba ubusazi isipho sikaThixo
→ Abantu abaninzi namhlanje bahlala ngokungazi zizonke ngoThixo ubomi enikeza yena.
Le ndoda esihogweni
→ Funda oku kwaye ubone movie-eyenziwe kakuhle ngayo ngebali kaYesu indoda esisityebi noLazaro. Eli bali akukho uthelekiso. Oku kwakusenzeka ngokwenene.
Asinto yebhayibhile abafazi kubabingeleli
→ - Yaye amadoda mhlawumbi!
UHolger Nilsson Iintetho kunye Christer Åberg kwembambano United States - Iran
→ Ngaba kukho imfazwe yehlabathi wesithathu ngoku?
→ Apha uyakwazi uxoxe ngayo yonke into phantsi kwelanga, okanye ubhale nje us!
Ukuba ufuna intetho ngoYesu nendlela ukuze asindiswe?
→ Yenza oku ku Apg29 okanye uqale usindiso lwakho blog!
Ngaba imfazwe enkulu phakathi US ne Iran?
→ I-US ukuhlasela irula enokukhokelela impi enkulu kuMbindi Mpuma, utsho Rouzbeh Parsi, kuMbindi Mpuma ingcali kwi UI.
Yeyiphi Bible kufuneka ukhethe?
→ Ke okanye King James Bible in Swedish?
Ngaba iBhayibhile ithi sifanele goca iingalo zakho uze uvale amehlo akho xa sithandaza?
→ Okanye yeyona ndlela iqhelekileyo ukuba ubuze likhohlakele?
19 degrees ngoJanuwari 2, 2020 eNorway
→ Global warming sesinye isizathu, ngokuvumelana abaphandi.
Ucinga ntoni ngayo Apg29?
→ Ngoko ke apha, ngomhla wokugqibela, Ndithanda ukwazi ukuba ucinga ntoni na Apg29.nu?
Le terrorist laseMelika 2019
→ 336 laseMelika-2019 eSweden. bathwalwa Bangaphi kubo phandle abanqolobi?
Ukutshutshiswa kwamaKristu e Nigeria
→ Isizathu sokuba amaKristu etshutshiswa Islamist ingcinezelo eNigeria.
Ngokwesiprofetho for 2020: Le minyaka imbalwa idlulileyo - Gösta Karlsson
→ imfundiso lesiprofeto Gösta Karlsson
Iselula - time inkosi yethu
→ Ngoku lixesha lokuba ingqalelo sisifo entsha kazwelonke.
→ Morden bevisar än en gång att kristna är världens mest förföljda grupp.
Ufumana ezulwini ukuba ukuzibulala?
→ Norwegian Princess uMarta-Louise Owayesakuba ngumyeni Ari Behn ezibulele eneminyaka engama-47.
UYesu wazalisekisa uMthetho
→ Ngaba simele ukuba uwenze?
UDade uTsipora kunye nombono Rachael ngayo ayobe
→ "Kutheni na, kutheni khawuleza wenze nobuvangeli? Ayikwazi na? Akukho xesha ngaphezulu!"
Isilumkiso kubaprofeti ababuxoki
→ Lumkela abantwana kubantu emthethweni, ukuba fake kunye iprofethe ababuxoki.
→ Njani ngoku kwaSirayeli le meko.
Ingaba uyawaxhasa Apg29?
→ Ngoko ungenza njalo apha.
→ Nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nam!
Uxinzelelo evela imikhosi yeedemon kuyinto eyenzekayo
→ Ngoku ndifuna ukuba ukungqinela ngcolile ndiye ndabona phantsi koxinzelelo oluvela imikhosi yeedemon.
Wena uya kusindiswa
→ Xa uyamamkela uYesu Kwenzeka ukuba imimangaliso omnye. Kuya kusindiswa - oko kukuthi basindiswe.
IBhayibhile ichaza umchasi
→ Umchasi eyazekayo kathathu.
ukufa World uMvangeli uReinhard Bonnke kaThixo
→ Izigidi watyelela iintlanganiso zayo kunye nabantu zazisoloko basindiswe.
Ebba Busch Aqui iyahluka
→ Ngaba umKristu abe eyahlukileyo?
Isihlabo akuyona eyakho
→ Ngokucacileyo kakuhle zonke wafumanisa ukuba ukoyika, nokoyika yenye noluhlala zethu iintshaba?
Umntu ophulaphula namabhere
→ Ndiza kucinga iindlela zam endala indima kuKristu, ukuba kukho ngexesha iminyaka yam yokuqala njengomKristu. Ukudla bandinika ingcebiso nentuthuzelo, kodwa athethiswe.
Ekuzalweni kukaYesu - Nguwuphi ummangaliso
→ Christer Åberg othetha ukuzalwa kukaYesu sizokucula ukudlala imizuzu 29.
Kubekho ukugwetyelwa nisindiswe ngokubabalwa ngalo ukholo kuYesu Krestu
→ Umntu akakwazi ukwenza yena elilungisa.
→ Yeyiphi iphephandaba na ezi sexrubriker?
Xa kukhunjulwa umfundisi nesibindi Cuba
→ ibandla elikhulayo Cuba ngayo!
Ukuba sicinywa okungafunwayo ekufeni?
→ Ndifanele bajeziswe ngokufa enomdintsi?
Christer Åberg e Tannåker yee-90
→ Ndingubani na ke mna kulo mfanekiso?
Ukuthandaza ngoMariya likhohlakele
→ The Catholic Church kude kakhulu ngokubhekiselele ukuphakama kaMariya yiyo kwakhona kude oko iBhayibhile ikutshoyo kwakhe.
UYesu Kristu, iThemba lethu kuphela, ukuwa komntu icebo likaThixo losindiso
→ Sele 1 Genesis 3, sibona ngayo kwanendlela icebo likaThixo uqala ukuthatha imilo.
→ Kudla wachaza uYesu neenwele ezinde, kodwa loo nto ngokwenene iBhayibhile?
lokuzama ukubulala of uDonald Trump
→ tasters trump wagula ngesiquphe emva kokuba ityhefu.
Bona kuqala umboniso kwehlabathi ezingoYesu
→ Yeyona umboniso kuphela ukuba kubhalwe ngokupheleleyo kwi sites kwibhayibhile!
Want isigwebo okanye inceba?
→ Kuyinto ubabalo elisindisa akukho umgwebo.
UThixo ufuna kungekho ntshutshiso
→ Ukuba nguThixo ukuba siza kutshutshiswa, ngoko bekuya kuba mhlawumbi kunjalo endaweni-1 Timoti 2: 2.
Oko uYesu wabhala esantini?
→ Uya kufumana impendulo umdla!
iincwadi zabantwana malunga yoga
→ Yoga kuthatha isikolo sabantwana abancinane.
ubulungisa kaKristu kuza kuwe
→ Mamela apha! Ngenxa nokholo kuYesu Kristu ilungisa thina.
→ SET lusekelwe encryption, iziqinisekiso digital kunye usayino lwedijithali (ehambelana utyikityo xa purchases ikhadi rhoqo).
Ukholo lwembewu yemostade
→ njani inxaxheba inkolelo ngakumbi, mkhulu kunye ukholo?
→ Ngoku Ke uye website yayo: bibelonline.se
→ Ke abathile netiquette kwi izimvo Apg29
→ EBhayibhileni, kukho izilwanyana ezininzi.
→ Yonke imihla, malunga 780 000 abantu nokholo kuYesu!
Uphononongo: Ayikho abanye oothixo
→ Christer Åberg ukubuyekeza Per-Arne Imsens incwadi edumileyo Akukho thixo bambi.
→ Le nto ebhayibhileni ngokuprofetayo / uMoya oyiNgcwele ngamandla ukuba iintliziyo zethu, "kufanele" gurgle kunye iinwele phezu kweentloko zethu kuvuka.
Amafu ekusenokuba crumbled
→ Kungakhathaliseki ukuba sisityebi umntu ngoko "ongumnini" yena isithuba nje ulusizana encinane ukugcina inkqubo yekhompyutha.
Owayesakuba Umfundisi bakwaMoya Michael Karlendal ukushiya Catholic Church
→ Yena aguqulwa ngenxa yokuba enetyala yebhayibhile, kodwa ngenxa yezizathu zembali. Kakade oku kufuneka kube izibane isilumkiso ajika abe bomvu.
Unobhala: Halloween umthendeleko yethu enkulu
→ A ukufa "isidlo" leyo ingakumbi abantwana.
→ Oku kufana kunye uEnoki. "Wena sambona ithenwa, kuba lalihamba ngakumbi." Yena nje yanyamalala, azafunyanelwa ndawo.
Ngaba UYesu 2036?
→ Kodwa ukuba uYesu ngokwenene uzobuya 2036 ngoko ke kufuneka ayobe yezibhalo kwenzeka 2029th
Adolf Hitler waba imifino
→ Uthole ufuna 'ukugcina isimo "ngabo bonke abantwana ukutya abatya.
INdibano yeZizwe eziManyeneyo iya sixwilelwe emafini ukuba ibonane noYesu emoyeni
→ IBhayibhile ithi sifanele sixwilelwe emafini. Qaphela ukuba umi up. indlela yethu ndlela phezulu.
→ Le veki kufuneka abanquli!
Isigwebo sentambo amadoda alalanayo zibhalweni
→ Bakwenza oku ngokubhekisele ukholo lwamaKristu. Kodwa ke oku likhohlakele ngokupheleleyo.
ukufa Abu Bakr al-Baghdadi ngayo - iba NGABA kubi ngoku?
→ inkokeli Terror of ikhoyo ibiselikho kwabulawa ekuphangeni US. Al-Baghdadi yaba PhD kwimbali Islamic eyavusa ingubo yakhe ukuzibulala, wazibulala yaye oonyana bakhe.
→ Onke amaKristu afanele kuyibona iYerusalem ngendlela lesiprofeto.
IBhayibhile ithi kufuneka ukumamkela uYesu
→ Zonke ezi vesi zibonisa ukuba kufuneka ukwamkela uYesu basindiswe!
→ I indawo ezulwini lizwe, siye emoyeni wethu ukuba tshe mgama.
Ukuba nosapho lwam oyintanda kunye nabahlobo
→ Musa ukukholwa weza singabasemzini basisa. Ayiyonyani.
Musa ityala ihlabathi ukuba akafuni ukushumayela ngoYesu
→ Ngumsebenzi amaKristu ukuba ashumayele ihlabathi - hayi ihlabathi!
→ Apg29 usebenzisa cookies.
Ezalwa ebukumkanini bukaThixo
→ Ukuba abemi osemazulwini into emangalisayo.
→ pair Pastor Stefan noMariya Hallman uye wavalwa kwi YouTube.
Indalo yavela ngelizwi likaThixo
→ Ziziba yokuba onke amaxesha abantu babekholelwa ukuba umhlaba ungqukuva. Nkqu iBhayibhile ithetha umhlaba nxazonke!
→ USirayeli ibuyiselwe njengesizwe kunye amaYuda wabuyela elizweni.
ukubuya kukaYesu ngaphambi kwembandezelo
→ Ngelo uXwilo, uYesu uza kuba ibandla lakhe xa ifika ekupheleni kwembandezelo, uza nebandla lakhe.
Umalusi olungileyo kweli lizwe Vala
→ Oku kukuzibophelela eyona nto ibuhlungu kukuba le nto, njani na ushiye UMALUSI?
Le nkolelo Ukuba Umhlaba caba zibhalweni
→ Uluvo lokuba ibandla bamandulo babekholelwa ukuba umhlaba usicaba amanga kusuka mvelo
Ethiopian Prime Minister Ahmed Abiy, umKristu ozinikeleyo, owazuza iNobel Peace Prize 2019
→ Ethiopian Prime Minister Ahmed Abiy zifumana i-Nobel Peace Prize ngowe-2019 ngokuphumeza uxolo kusonjululwa ngongquzulwano eselumelwaneni Eritrea.
→ Trolls bafuna ukuthintela abantu ukuba basindiswe ngoko ke umele ungaze kwalusa.
Halloween - ebusuku epheleleyo iidemon
→ Facts about Halloween. Halloween nto ngaphezu isithethe endala lobuhedeni ukuba akukho mntu kufuneka benze lo, unguyena mncinanana kubo bonke ngumKristu. Ukufa nobubi uyazukiswa.
Kwinkqubo yogcino Swedish
→ Inxalenye ezintathu ethi The ikheshi itulo Cash kuphela.
Umfundisi umthandazo sina funny
→ Iphephandaba i nemini fun of umfundisi ukufunda ifowuni ngoxa wayethandaza.
→ inkqubo live Christer Åberg 29 imizuzu ukusuka studio ekhaya Meadow
Pastor umthandazo sina funny
→ Ngaba simele sibe nokuqonda mkhulu lonke ixesha abalinganiswa - uSirayeli?
Ubungqina: wabona njani ubhaptizo loMoya oyiNgcwele
→ Ndikhumbula wathi, "yi ubhaptizo loMoya ukufumana amandla."
Kontantlöshetens "Antiquity" kunye nembali yokuqala
→ Kwincwadi ethi The ikheshi iyelenqe. Ngengqiqo mihla, ingcamango kwavela ukuthenga ikheshi karhulumente ngo-1949.
nezinyuko ezisixhenxe endleleni ukholo
→ Inyathelo lakho lokuqala endleleni yokholo.
Le ikheshi itulo - Isandulela
→ abasebenzisi Imali achazwe iintsana Small abo bangazazanga okulungileyo yabo.
Hayi, Greta ayikho Umchasi
→ Ndenze email umfundi ithunyelwe kum apho umbhali nemimangaliso ingaba oneminyala eli-16 ubudala kokusingqongileyo Greta Thunberg Lowo ungumchasi-Kristu.
→ Yintoni win beshumayela nkqubo loluntu, Agenda 2030 kunye lwemozulu?
Ukwaluka akuncedi nto
→ Ulwaluko akakwazi kuzala na kuwe kwakhona, kodwa kunokuba uYesu Kristu.
→ Abo baye bafa kuKristu uya kuza kwam, niphume emangcwabeni abo ngexilongo. Baya kuguqulwa nathi ophilileyo.
Malle Lindberg igcwalisa iminyaka 90
→ Bona imifanekiso ezizodwa kunye nevidiyo ne Malle Lindberg!
Yayinempahla Umchasi umva
→ Yintoni na uzibambileyo emva umchasi-, ukuze abe nako esaphuma kwibakala lehlabathi de ixesha elifanelekileyo?
Umfazi waya nomzukulwana Estonia
→ Le yenye yezona ukwazi bukaThixo bukusa, njengoko endakha batyhubela.
Ubungqina: Indlela I wasinda
→ Ngenye imini ndaqonda ukuba bukaYehova buthe ngokwenene yaye owazuza Calvary.
Nika Sweden uYesu
→ 29 imizuzu ngu Christer Aberg
UYesu - isintu iziqinisekiso
→ Wema uYesu isibambiso a lwesintu yonke.
Intliziyo kufanele zibonise uYesu
→ Ihlabathi kufuneka amaKristu iintliziyo atshisa kwaye isipili ebonisa uYesu Kristu.
→ Kukho idabi lokomoya kwilizwe lethu phakathi Christianity and Islam.
Arne Weise ufile
→ umthuthuzeli Swedenborg kunye mysfarbrorn evela Eva Christmas Donald Duck ufile.
UYesu nguye yedwa, uMsindisi
→ Christer Åberg kaThixo kusasazo live 29 imizuzu.
Female eNetherlands ibibanjelwe busisigxina ukubulawa
→ Ngoku ke ugqirha wazama enkundleni mayingabi natyala leyo unkabi applåders enkundleni.
Ukuba ufuna ubungqina kuYesu kwi Apg29?
→ Ngenisa ubungqina bakho, ebhaliweyo, ividiyo okanye ifayile yesandi apha.
→ Christer Åbergs liveprogram 29 minuter där han sjunger, spelar på ukelele och talar om Jesus.
Ngoko ke kubhaptizwa ngoMoya
→ Christer Åberg isixelela zosasazo lwakhe bahlala indlela aba uMoya Christening
Season isiqalo Ezulwini TV7: A lizwe ozelwe ziintlungu
→ "Ukuba Israyeli Ngenkohlakalo nto ihlileyo."
Esi sigqubuthelo ke isono Islam
→ Ikhuselo nezambatho ndiyangqina ukuba Muslims.
UYesu uya? - UHolger Nilsson
→ UHolger Nilsson lizisa incwadi yakhe entsha "Nini UYesu?" kunye neentetho ezithetha ngalo mbandela.
David Wilkerson ngentshukumo ukholo
→ "Umfundisi wathi, uye kude, ngenye imini, womshumayeli weendaba eme uthi, ndiye ndafumana isityhilelo esivela kuYehova, eli lixesha lokuba uqale banqula uMariya. Iya kuhamba kwindawo apho."
Ngaba amaKristu akukho counterweight kwinkohlakalo ekuhlaleni?
→ Abasemagunyeni kuye kwanyanzeleka ukuba ukuvala nasezintolongweni, kwaye nkqu nasezintolongweni Riva, abantu baye basebenzisa nguYesu baguqula ubomi babo.
→ Christer Åberg othetha ngayo njani xa wabhaptizwa
→ Kubuntu ukufana Yesu!
→ abantwana besikolo kufuneka ukhuselwe ideology isini, ubhala uMongameli Brazil kaJayire Bolsonaro on Twitter.
Umama uye wanamathela
→ ncwadi emangalisayo Stefan Hallman ngayo!
A isiqalo esitsha Apg29
→ Ekuhambeni kwexesha kuba engama 18 Ndiyiqala ngokupheleleyo kwisiza ezithandwayo!
Ngoko ke wasinda
→ ubungqina Christer Åberg ngayo nendlela uYesu wamsindisa.
V 08, onsdag 24 februari 2021 kl 18:05